भिडियो « Naya Page
करोड ‘भ्युज’ पुगेपछि कार्टुन्ज क्रुज जोडीले काटे केक
काठमाडौं, ७ चैत : आफूले अभिनय गरेको भिडियोको भ्युअर्स करोड पुगेको उपलक्ष्यमा कार्टुन क्रुज जोडी सरोज अधिकारी, आस्मा विश्वकर्मा र सरोज ओलीले बुधबार केक काटेर खुशी बाँडेका छन् । नायिका प्रियंका कार्की र कार्टुन्ज क्रुका सरोज अधिकारी र आश्मा विश्वकर्माको अभिनय रहेको गीत ‘माछीले खाने खोलीको लेउ’ ले करोड भ्युज
फिल्म खेल्न छाडेका सुनिल सेठ्ठीको कमाइ डेढ अर्ब, के गर्छन् उनी ?
काठमाडौं, ६ चैत : कुनै समय शाहरुख खान, अक्षयकुमार, अजय देवगणलगायतका चलेका हिरोलाई टक्कर दिएका भारतीय नायक सुनिल सेठ्ठी अहिले चलचित्रको पर्दामा देखिंदैनन् । ११० भन्दा बढी हिट चलचित्रमा अभिनय गरेका उनी अहिले चलचित्र दुनियाँ भन्दा टाढा छन् । तर, उनको कमाइ अन्य चलिरहेका हिरो भन्दा कम छैन । उनले
बेडसिनका लागि कोही निर्माता–निर्देशकले नसम्झिए हुन्छ : नायिका आँचल शर्मा
काठमाडौं, ६ चैत : चलचित्र दुनियाँमा किस र बेडसिनलाई सामान्य मान्ने नायिकाहरु धेरै छन् । तर, यहि नायिकाहरुको भिडमा आँचल शर्माले भने बेड सिन र किस सिन लिनका लागि आफूलाई कोही निर्माता–निर्देशकले नसम्झिए हुने बताएकी छन् । चलचित्र शत्रुगतेले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले यसो बताएकी हुन् । चलचित्रको
काठमाडौं, ५ चैत : अहिलेका चर्चित नायक दयाहाङ्ग राई एक्लिएका छन् । नायक राई उनको पारिवारिक सदस्यबाट तिरष्कृत भएर वा अन्य कुनै कारणबाट एक्लिएका होइनन् । भर्खर आएको एक चलचित्रको कथावस्तुमा उनी एक्लिएका हुन् । चैत ३० गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरिएको फिल्म ‘नेप्टे’ का पोष्टरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
नायिका रेखा थापा जाजरकोटको गाउँमा कलाकार खोज्दै
काठमाडौं, ५ चैत : आफूलाई चलचित्र बाहेक सामाजिक काममा समेत सक्रिय बनाएकी नायिका अहिले जाजरकोटको गाउँमा कलाकार खोज्न निस्किएकी छन् । अभिनेत्री रेखा थापा यतिबेला बालबिवाहकाविरुद्ध सशक्त अभिनय गर्न सक्ने एक बालिकाको खोजीमा छिन् । जीवन रुपान्तरणका प्रशिक्षक नरबहादुर कार्कीको अवधारणामा बालबिवाहविरुद्ध सशक्त अभियानको रुपमा निर्माण हुने फिल्मका लागि बालबिवाहबाट
आयुष्मान–प्रियंका जोडी बाँधिदै
काठमाडौं, ४ चैत : प्रेम सम्बन्धका कारण सँधैं चर्चामा रहने नायक आयुष्मान देशराज जोशी र नायिका प्रियंका कार्की जोडी बाँधिने भएका छन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीको प्रेम सम्बन्ध कोहीसामु लुक्न सकेको छैन । सामाजिक सञ्जाल, मिडियामा यी दुई आफ्नो प्रेमबारे खुलेर नै आइरहेका छन् ।
अमिताभ बच्चनसँग अनुहार मिलेपछि भाइरल बन्दै शाबुज
काठमाडौं, ४ चैत : कहिलेकार्ही चर्चित व्यक्तित्वका कारण सर्बसाधरणले समेत आफू चर्चामा आउने अवसर पाउँछन । अफगानका एक शरणार्थी प्रौढ पुरुष एकाएक भाइरल बनेका छन् । बलिउडमा महानायक भनेर चिनिएका अमिताभ वचनको अनुहारसँग मेल खाने अनुहार भएका अर्का एक ब्यक्ती भेटिएका छन् । शाबुज नाम गरेका ६८ वर्षीय अफगानी शरणार्थीको मुहार
नायिका अश्लेषाकाे ‘तिघ्रा’ ले सामाजिक सञ्जाल तताउँदै !
काठमाडौं, १ चैत : चलचित्रका नायिकाहरुको सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुनु स्वभाविक हो । अहिले प्रेमगीत–२ की नायिका अश्लेषा ठकुरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेकी छन् । तर, अहिले अश्लेषाको चलचित्रको नभई उनको तिघ्राको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ । केही साताअघि मात्र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले स्तनमुनि ट्याटु खोपाएको
आमा बन्न लागेकी नायिका निशा ‘हिप ओपनिङ’ योगाभ्यासमा
काठमाडौं, १ चैत : क्रिकेटर शरद भेष्वाकरसँग विवाह गरेकी अभिनेत्री निशा अधिकारी आमा बन्ने संघारमा छन् । एउटा स्वस्थ बच्चा जन्म दिने तयारीमा रहेकी निशाले समय–समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो अवस्था जानकारी गराउँदै आएकी छन् । उनले २९ औं हप्ता ६ दिनको गर्भ रहेको पनि सार्वजनिक सञ्जालबाट जानकारी गराएकी छिन् ।
साम्राज्ञीको अफेयर टुरिष्ट गाइडसँग !
काठमाडौं, ३० फागुन : चलचित्रका कलाकारहरुको अपेयर कसको कोसँग भन्ने कुराले सिने जगतमा निकै चर्चा पाउने गरेको छ । कसैले खुलेर आफ्नो अफेयर खुलाउँछन् भने कतिले गोप्य नै राख्ने कोशिस गर्छन् । अहिलेकी चर्चित नायिका साम्राज्ञीको अपेयर चाहीं कोसँग होला ? उनका दर्शक तथा शुभचिन्तकको मनमा जिज्ञासा रहँदै आएको छ ।
धनगढीको पहिचान बन्दै क्रिकेट
–सिद्धराज भट्ट धनगढी, १० चैत । क्रिकेट खेलका गतिविधि बढ्दै जाँदा प्रदेश नं ७ को
कतारमा रेमिट्यान्स सहज बनाउन पहल शुरु
बिबिसी: कतारबाट रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउन कतारको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई अनुरोध गरिएको दोहास्थित नेपाली दूतावासले
नारायणगढ-मुग्लिन सडक विस्तारको लागत ४३ करोड बढ्ने
चितवन : नारायणगढ-मुग्लिन सडक विस्तारको लागत मूल्य कम्तीमा रु ४३ करोड बढ्ने भएको छ।
किन स्लिम बनिन् साम्राज्ञी ?
काठमाडौं, ९ चैत्र । नायिका साम्राज्ञीराज्ज लक्ष्मी शाह केही समय अगाडी मोटाएकी थिइन् । तर
ज्योति मगर र आस्था राउतबीच ‘हानाहान’
काठमाडौं, ९ चैत : गायन शैलीका कारण सधैजसो चर्चामा रहने गायिका ज्योति मगर र अर्की
‘शत्रुगते’ बिहानी सो हाउसफुल, आँचल शर्माले थाम्न सकिनन् आँसु
काठमाडौं, ९ चैत्र । मह सञ्चारको प्रस्तुति र किरण केसीको निर्माणमा बनेको चलचित्र ‘शत्रुगते’ आजबाट